Soo dejisan Photoscape 3.7 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaPhotoscape
Bogga rasmiga ah: Photoscape
Photoscape – software ah si aad u eegto iyo edit sawirada. software waxay leedahay set badan oo qalab ah si loo farsameeyo iyo saxo sanamyadii. Photoscape waa awoodaa inuu beddelo size ee images, ka saar-indhaha oo casaada, ku dar qoraalka si ay u images, dooran loox ee sawirada, retouch sanamyadii, iwm Photoscape kuu ogolaanayaa inaad si ay u isticmaalaan images badan si ay u abuuraan ee GIF-animation. Sidoo kale software ah u saamaxaaya in ay beddelid files ka cayriin ee in format JPG. Photoscape ku jira arrimo collage kala duwan si ay u abuuraan ururinta photo baahida user ee.
Habaysaa dhalaalka midabka iyo la barbardhigo
Dufcaddii processing image
Jarida of photos qaybo badan
Waxay abuurtaa ah GIF-animation
Badalidda files cayriin galay JPG
Soo dejisan Photoscape
Faallo ku saabsan Photoscape
Photoscape Xirfadaha la xiriira